04/12/2017 - Page 2 sur 4 -
Taolan-dava miisa 250, milanja 35 kilao no tra-tehaky ny polisy tamin’ny olona miisa enina, izay nahitana lehilahy efatra sy vehivavy roa ny sabotsy 02 desambra teo, tokony ho tamin’ny 02 ora sy sasany tolakandro tany …Tohiny
Imerintsiatosika : Zaza iray matin’ny lozam-pifamoivoizana
Nitera-doza indray ny fiara fanaovana hazakazaka. Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tsy dia fahita firy eto an-drenivohitra indray teny Angaro kaominina Imerintsiatosika omaly alahady tolakandro . Fiara iray nitondra olona izay nahitana telo mianaka no indray nifatratra …Tohiny
Ambatolampy : Omby 70 halatra hitan’ny zazamainty
Nisehoana fanafihana omby indray tany amin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy, kaominina Ambatolampy ny alin’ny alakamisy 30novambra lasa teo, tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany alina. Omby maherin’ny 150 no voatafik’ireo dahalo mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika tamin’izany. …Tohiny
Andro maitso tsy misy fifamoivoizana : Vitsy ireo malagasy nahalala ny fisiany
Ao anatin’ny fankalazana ny « andro maitso tsy misy fifamoivoizana » (journée verte sans circulation), ho an’ity taona ity, dia niantso ireo mponina hampiato ny fitaovam-pitaterana toa ny môtô, fiara, ny 3 desambra teo, ny …Tohiny
Tao Morondava no nankalazana ny Jne ( Journée Nationale des Enfants) na andro iraisam-pirenena ho an’ny Ankizy, ho an’ny finoana katolika. Nisy ny fotoam-bavaka lehibe nentina nanamarihana an’izany tao amin’ny Katedraly Maria Manjaka Namahora any ...Tohiny